ဗလီကို ချစ်သူများ၏ နေ.တနေ. / မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၃) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၃)” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Muslims and the program of Mosque Tour Guide – Part 23
ယခုအပါတ်တွင်မြန်မာပြည်အလည်ပြန်ခရီး- ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ.မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် – ၉ ရက်အကြာ မြို.ကြီး ၅ မြို.ခရီးစဉ်၌ ၂၈.၀၁.၂၀၁၃ တွင် မန္တလေးမြို.မှာ ဗလီ ချစ်သူများ၏နေ. နေ.တနေ. အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထိုက်ဖွယ်ရာ ခေတ္တ အလည်သွားရောက်နိုင်ခဲ့ဖွယ် အကြောင်းကို ဖော်ပြပါမည်။
မြို.ခံ ဦးလေးသားချင်းများဆီမှာ တစ်ညအိပ်ပြီးမနက် သူ.သမီးနှင်.သားတို.ရဲ. မန္တလေးတခွင် ဘယ်လိုက်ပို.ပေးရမလဲမေးစဉ် ဗလီဧည်.လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလုပ်အားပေးပီသစွာ မြန်မာ မွတ် စလင်မ်သမိုင်း အထောက်အထားခိုင်မာ ဗလီများဆီ အမှတ်တရ လည်ချင်ပါသည် တောင်းဆိုခဲ့၍ အလ္လာဟ်အရှင်သဘောတူညီမှုဖြင့် ရောက်ခဲ့သမျှ ဤမှတ်တမ်းပြု ခဲ့နိုင်ပါပြီ။
ကျောက်ဗလီက အထွက် လမ်းတွင် ဖြတ်သန်းခဲ့စဉ် ရှေးလက်ရာ မိုနာရာစင်ဖြင်. ပေါ်လွင်လှပနေသော ဗလီတစ်လုံး၏ အပြင်ရှု.ခင်း၊ အတွင်း အမြင်များဖြင်. ပကတိ မန်းလေးသား မွတ်စလင်မ်တို.ဘဝ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာဌာန၏ မှတ်တမ်းတချို.ပါ။
ဆက်လက်ပြီး ဤလုပ်ငန်းအကြောင်းဗဟုသုတများ မျှဝေပေးနိုင်ခွင့်ရပါစေ။ ဖတ်ကြည့်သူ၊ တင်ပြသူ၊ လာရောက်လေ.လာသူများအား အလ္လာဟ်အရှင် နှစ်သက်လက်ခံ သဘောတော်မူကာ အခက်အခဲများမှ ဝေးလျက် အကူအညီများရပါစေ။
← ဒီအချိန်မှာမွတ်စလင်မ်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်နည်း။	မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၂) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၂)” →